लोगो कहिले नवीकरण हुन्छ? | क्रिएटिव अनलाइन
कर्पोरेट पहिचान कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाको प्रतिबिम्ब हो। जब एक डिजाइनर लोगो जस्तो कर्पोरेट पहिचानको कुनै तत्वको निर्माणको सामना गर्नुपर्दछ, वास्तवमा उनीसँग समयको साथ कालातीत र टिकाऊ केहि चीज निर्माण गर्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। यो प्रश्नको मा ग्राहक को एक शक्तिशाली, स्थिर र प्रतिनिधि निर्माण हुन पर्छ। यद्यपि त्यहाँ धेरै थोरै लोगोहरू छन् जुन कम्पनीको जीवनभर उस्तै नै रहन्छ। धेरै जसोसँग म्याद सकिने मिति हुन्छ। समय ग्राफिक र सौन्दर्य प्रवृत्ति परिवर्तन समान तरिकाले परिवर्तन हुन्छ। हामीले यो पनि बुझ्नुपर्दछ कि कम्पनीहरू, मालिकहरू, कम्पनीहरूका उद्देश्यहरू, दर्शकहरू जसमा कम्पनीहरू निर्देशित छन् र अवश्य परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ। किन लोगो परिवर्तन हुँदैन?
अझै, यसको मतलब यो होइन कि हामीले मूल रूपमा हाम्रो लोगो परिवर्तन गर्नुपर्दछ। सामान्यतया, जब पुन: डिजाइनहरू गरिन्छन्, वास्तवमै परिवर्तनहरू ठूलो स्तरमा गरिन्छन् तर केही मागहरूसँग मिल्दछन्। तब खडा हुने ठूलो प्रश्न यो हो जब हामीले यस प्रकारको पुनःनिर्माणको विचार गर्नुपर्छ। त्यहाँ केहि सूचकहरू छन् जसले हामीलाई चेतावनी दिन्छ कि यो कम्पनीको छवि परिवर्तन गर्ने समय हो:
1 मेरो लोगो यो जस्तो व्यावहारिक देखिदैन
2 मेरो व्यवसाय परिवर्तन भएको छ
मेरो लोगो यो जस्तो व्यावहारिक देखिदैन
कम्पनीहरूको एक ठूलो संख्या, विशेष गरी साना आयाम र नयाँ उद्घाटन को ती, आफ्नै लोगो विकास गर्न छनौट गर्न थाले। जहाँसम्म, राम्रो डिजाईन बनाउनु सजिलो काम होइन र यद्यपि धेरैको लागि यो जस्तो लाग्न सक्छ, वास्तवमा तपाईंलाई चित्रण, सम्पादन र मार्केटि .को ज्ञान चाहिन्छ। अनौपचारिक, गैर कानूनी र पू उपयुक्त लोगोको साथ ढोका खोल्ने कम्पनीहरू पत्ता लगाउन यो अनौंठो होइन। यदि यो तपाईको केस हो र तपाई अधिक पेशेवर र गम्भीर छवि प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो तपाईको लागि उपयुक्त समय हो यो विचार गर्न सुरु गर्न र पेशेवर डिजाइनरलाई भाडामा लिने।
मेरो व्यवसाय परिवर्तन भएको छ
कम्पनीहरु स्थिर परिवर्तन र अनुकूलन मा हुनु पर्छ ताकि बजार बाट काटिन छैन। सत्य यो हो कि त्यहाँ धेरै क्षेत्रहरू छन् जुन परिवर्तन गर्न सकिन्छ, वास्तवमा सामान्यतया कम्पनीहरूले यो महसुस नगरीकन परिवर्तन गर्दछन् कि तिनीहरू वास्तवमै विशेष माग र सार्वजनिकरूपमा अनुकूलन हुन परिवर्तन गरिरहेका छन्। हो, सबै साना परिवर्तनहरू हुन्छन् कि कर्पोरेट पहिचानको परिवर्तनमा पतित हुनुपर्दैन, यो उतना बेवकूफ हुनेछ किनकि यो काउन्टरप्रडक्टिव हो। जहाँसम्म, यदि ब्यापारको जीवनमा कुनै महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ भने, यो हाम्रो कर्पोरेट पहिचानमा प्रतिबिम्बित गर्न आवश्यक पर्दछ। यी परिवर्तनहरू हुन्:
विस्तार: कल्पना गर्नुहोस् कि एक कम्पनीले स्थानीय प्रभावलाई राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउँछ, वा एक राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय बन्न जान्छ। सौन्दर्यले यो नयाँ मोडुलिटी अनुकूल बनाउनुपर्नेछ किनकि यसले फरक छवि, बिभिन्न उद्देश्यहरूको सामना गर्नुपर्नेछ र अवश्य पनि यसले नयाँ क्षमता र क्षमताहरू पनि प्राप्त गर्दछ। यो व्यवसाय को छवि मा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।
विशेषज्ञता: विशेषज्ञता द्वारा हामी हाम्रो व्यापारको धेरै सुविधाहरू परिवर्तन गर्दैछौं, वास्तवमा हामी हाम्रो लक्षित श्रोताहरू, हाम्रो सेवाहरू वा प्रस्ताव गरिएका उत्पादहरू, मार्केटि strate रणनीति वा मानहरू परिवर्तन गर्दैछौं। यी सबै धेरै महत्त्वपूर्ण कारकहरू हुन् जुन पुन: निर्माण र सार्वजनिक र भविष्यका ग्राहकहरूलाई कम्पनीको नयाँ एयर वा टॉनिकमा प्रसारण गर्नका लागि।
नयाँ लाइन: समयको साथ, सबै चीज परिपक्व र परिवर्तन हुन्छन्, मालिकको महत्वाकांक्षा पनि। यसले सबै प्रकारको परिवर्तन वा दर्शनमा परिणामहरू, मूल्यहरू जुन पछाडि र उद्देश्यहरू हुन सक्छन्। यस अर्थमा, ग्राफमा एक निर्विवाद मनोवैज्ञानिक कम्पोनेन्ट छ र हामीले मानहरू र दर्शन बीचमा समन्वय प्रदान गर्नुपर्दछ र तिनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने तरिका। यदि यो मामला हैन भने, सञ्चार उद्देश्यहरू कभर गरिने छैन।
यदि प्रतिष्ठा समस्या देखा पर्‍यो भने: सबै परिवर्तनहरू राम्रो हुँदैनन्, वास्तवमा त्यहाँ सबै प्रकारका संकटहरू पनि छन्। आन्तरिक स usually्कट सामान्यतया एक कारण हो जसमा दृश्य र छवि परिवर्तनको आवश्यकता पर्दछ अधिक जोडतोडका साथ। विशेष गरी ती केसहरूमा जसमा प्रतिष्ठा संलग्न छ र हालको छवि अप्ठ्यारो छ वा खराब अनुभव, सम्झना र अवधारणासँग सम्बन्धित छ।
यदि हामीले बजार सेयर हराइरहेका छौं: जब हामी ग्राहकहरू हराउँछौं, हामीले तिनीहरूलाई फिर्ता जित्नको लागि प्रयोग गर्न सक्ने एक प्रभावशाली कारकहरू भनेको सञ्चार, विज्ञापन, मार्केटिंग र मनाउने हो। अवश्य पनि, यस सम्बन्धमा लोगोको छवि र डिजाइन धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » लोगो कहिले नवीकरण हुन्छ?
इगोर पाइवोर्साइक द्वारा 'रातो' मा निर्ममता